Accueil > Gazetin'ny nosy > Diosezin’i Farafangana : Anatin’ny fanomanana tanteraka
Diosezin’i Farafangana : Anatin’ny fanomanana tanteraka
Fety lehibe roa sosona tokoa no hotontosaina ao amin’ny diosezin’i Farafangana amin’ity volana aprily ity. Ny voalohany dia ny fametrahana ny eveka vaovao Gaetano Di Pierro amin’ny faha roa ambin’ny folo aprily ao Farafangana ao amin’ny kianja Don Bosco ary ny faharoa dia ny fanandratana ho olon-tsambatra an’i ramose Lucien Botovasoa izao hatao ao Vohipeno toerana niaviany sady namonoana azy ho maritioran’ny fivavahana ny alahady dimy ambin’y folo aprily. Efa am-perinasa tanteraka ireo komity mpanomana ary tsy misy fitsaharany ny fivoriana mba hahatomombana ireo fotoan-dehibe ireo. Handray vahiny maro ny eto Farafangana sy Vohipeno satria ho tonga ireo eveka maro, ireo vahoakan’ny fiangonana amin’ny lafy valon’ny nosy izay hiezaka ny hanatrika farafaharatsiny ny fanandratana olon-tsambatra satria tsy indroa amin’ny fiainan’ny kristianina katolika tokoa no hiainana izany fanandratana ho olon-tsambatra izany. Manararaotra sady efa samy nanao ezaka isaka ny Paroasy mba hahafahana miomana amin’ny fandaniana amin’ny famonjena ireo lanonana ara-pivavahana roa lehibe ireo. Azo antoka fa ho ambohi-pihaonan’i Madagasikara ny diosezin’i Farafangana amin’io fotoana io. Mirary ny olona mba tsy hisy ny rivo-doza ka hampiakatra ny rano na mety hanapaka ny lalana ka tsy ahafahana mifamezivezy. Tsikaritra koa fa misy fanamboarana na fanapenana ireo lalana simba manomboka amin’ny lalam-pirenena fahadimy ambin’ny roapolo avy eo Vohiparara ka mitohy amin’ny lalam-pirenena fahafito mampitohy an’Irondro ka hatrany Vohipeno. Saika efa feno ny famandrihana ireo hôtely na ny any Manakara na ny any Vohipeno na koa Farafangana. Ny avy any amin’ny nosy La Réunion amin’ny fanandratana olon-tsambatra dia miisa zato ary tsy latsaka izany isa izany na mihoatra betsaka ny delegasionina isaka ny diosezy. Hiasa mafy ihany koa ireo mpitandro filaminana satria maro ny olona hifamezivezy raha miohatra ny andavanandro. Misy ihany koa ny ezaka amin’ny fampitomboana ny rano madio ampiasaina ao Vohipeno ka efa tonga ireo fantsona madinika avy amin’ny ministeran’ny Rano ho fanatanterahana izany. Eo amin’ny lafiny ara-barotra kosa dia manao izay tratrany ireo mpandrary mba ahafahana mivarotra faran’izay betsaka harona na satroka na tsihy hatao voan-dalan’ireo mpitsidika. Tombony ho an’ny mpino katôlika ny fankalazana sahala amin’izao satria manamafy ny finoana, mampitombo ny serasera eo amin’ny samy katôlika ary koa fanehoana firaisan-kina sy fiombonam-bavaka hirosoana lalin-dalina amin’ny finoana.
Vidin-tsolika: Tafakatra 4020 ariary ny vidin-dasantsy
Mbola voaporofo fa tsy voafehin’ny fitondran-dRajaonarimampianina ny fisondrotra ny vidim-piainana, indrindra fa ny vidin-tsolika. Ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahadin’ny Paska teo no niakatra indray ny vidin-tsolika. Nisondrotra 90 ariary ny lasantsy SP 95 ka lasa 4020 ariary ny litatra raha 3930 ariary teo aloha. Nisondrotra 90 ariary koa ny Gasoil izay lasa 3370 ariary ny litatra raha 3280 ariary teo aloha. Ny solika fandrehitra kosa na ny Pétrole dia nahitàna fisondrotana 40 ariary ka lasa mitenti-bidy 2440 ny litatra raha 2400 ariary teo aloha. Marihana fa samy niara-nampiakatra izay vidin-tsolika izay daholo ireo kaompanian-tsolika tamin’io sabotsy alina io, saingy noho ny antony tsy fantatra dia nampidina ny azy ka namerina tamin’ny vidiny teo aloha indray ny kaompania Galana sy Jovenna. Ny Shell sy ny Total kosa mbola nitazona ny fisondrotana 90 ariary, hatramin’izao ora anoratana izao. Mampametra-panontaniana ihany moa ny antony nahatonga ny Galana sy ny Jovenna niverina tamin’ny fanapahan-keviny ka nampidina indray ny vidin-tsolika. Raha ny fahitan’ireo mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena dia mety noho ny fahatahorana no nahatonga azy ireo niverina tamin’ny vidiny teo aloha ihany. Raha ny fanazavana efa nohantitranterin’ireo tompon’andraikitra ara-panjakana izay voakasika amin’ity resaka solika ity dia ny fametrahana ilay hoe “vérité des prix” no antony mahatonga ny vidin-tsolika tsy miakatra eto amintsika. Ny mahagaga, na tsy misy fitsaharany aza izay vidin-tsolika izay, na tafakatra 4000 ariary aza ny vidin’ny 1 litatra amin’ny lasantsy dia tsy misy mihetsika ny mpanjifa sy ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena izay milaza ho mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Ny fanjakana moa etsy ankilany dia efa hiarahan’ny rehetra mahita fa tsy mahafehy na inona na inona intsony eto amin’ity firenena ity. Tsy vitan’ny hoe tsy mahafehy ihany fa izay baiko rehetra omen’ireo mpamatsy vola avy any ivelany dia tsy maintsy tanterahina ara-bakiteny na fantatra izao aza fa mamono ny Malagasy.